Arzantina, Chile ary Bolivia Vonona ho amin’ny #Dakar2015 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2015 19:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Aymara, Français, Español
Dakar 2012 tao Arzantina. Saripikan'i Laura Schneider
Hanomboka amin'ny 4 janoary ho avy izao ary hitety firenena Amerikana telo dia i Arzantina, Chile ary i Bolivia mandritra ny 13 andro ny hazakazaka fiara [sy môtô] mandeha maotera mafy indrindra eto an-tany antsoina hoe Dakar.
Hiainga avy eo Buenos Aires amin'ny fahaefatry ny volana ny andiany 2015 ary hanavatsava tanàna tahaka an'i Villa Carlos Paz, San Juan, Chilecito ary hitodi-doha any amin'ny tangoron-tendrombohitra Andeana hanatratra an'i Copiapó any Chile, Antofagasta ary Iquique. Aorian'izany dia hisaraka mankany Uyuni, any Bolivia ny lalana. Ny fahasamihafana amin'ny andiany 2014 dia tsy tafiditra ao anatin'ny lalana i Però.
Hatramin'ny 2009, nivelatra nankany Amerika Latinina ny fifaninanana taorian'ny famonoana ireo olom-pirenena frantsay roa sy miaramila maoritaniana tamin'ny 2008.
Niresaka momba ny fitondrana amin'ny sambo ireo ireo fiara hanaovana ny Dakar 2015 ny blaogin’ Daniel Hernandez ao amin'ny Diario Vasco :
Nisy fialàna hamohamo kely ihany tamin'ny farany. Enjikenjika be manadala tokoa teo ho eo tamin'ny fikarakarana farany nialoha ny nanondranana ny fiara tao Le Havre. Miisa 645 ny isan'ny fiara voasava hatramin'ny antsipirihany ka ao anatin'izany ny fiaranay, ankehitriny afaka miteny izahay fa hanomboka ny “aventure”.
Azonao arahina ny vaovao rehetra momba ny #Dakar2015 amin'ny alalan'ny fanarahana ny tahalan-tranonkalan'ny mpikarakara.